Khamiis 15 Bisha Afraad 2021
Miisaska Miiska Bamirla waxay u taagan tahay Hungary Bátor Tábor oo ah xero loogu talagalay carruurta qaba kansarka ama jirro kale oo raaga. Ujeeddada loo leeyahay qaabkan ayaa ah in jawiga xerada loo gudbiyo isticmaaleyaasha leh wareegyada, qaababka ciyaarta, isticmaalka midabada iyo dabeecadda farshaxanka iyo farshaxanimada. Qurxinta waxay tixraacdaa kaamka waxayna ku saleysan yihiin seddexdan fikradood ee soo socda: sumadda xerada, aasaaska carruurta iyo sawirada guryaha. Miisaska miiska waxay u muuqdaan inay taageeraan caadooyinka cunnada caafimaadka leh sidaa darteed waxaa loo qaatay inay cunaan waxyar-inta badanna ku celceliya cabirkooda.
Arbaco 14 Bisha Afraad 2021
Soo-Bandhigidda Abaalmarintu Marxaladdan dabaaldeggu waxaa loogu talagalay muuqaal gaar ah waxayna u baahnayd dabacsanaan soo bandhigida bandhig muusig iyo dhowr abaalmarino kala duwan oo bandhigyo ah. Qaybaha la diyaariyey ayaa gudaha laga shiday si ay gacan uga geystaan dabacsanaankan waxaana ku jira xubno duullimaadyo ah oo qayb ka ahaa set oo la duushay intii lagu jiray bandhigga. Kani wuxuu ahaa bandhig iyo abaalmarinno sanadle ah oo loogu talagalay urur samafal.
Talaado 13 Bisha Afraad 2021
Isniin 12 Bisha Afraad 2021
Diiwaanka Vinyl 9ka ugu dambeeya waa baloog muusig oo aan xadidanayn noocyada; muuqaalkiisu waa daboolida qaabka qaabaynta iyo iskuxirka ka dhexeeya qaybaha muuqaalka iyo muusikada. Sagaalkii ugu dambeeyay waxaay soo saartaa isku-darka muusikada, midkastana waxaa kujira mowduuc muusig oo muhiim ah kana turjumaya aragtida aragtida. Laydhka Tropical Lighthouse waa isku darka 15aad ee taxanaha. Mashruucan waxaa ku dhiiraday sanqadha duurka kuleylaha ah, iyo dhiiri gelinta ugu weyni waa muusigga farshaxan-yaqaannada iyo muusigga Mtendere Mandowa. Cover, video promo iyo vinyl disc kaydinta ayaa loogu talagalay mashruucan.
180º North East Sheeko Talaado 22 Bisha Lixaad
Ballo Hadalka La Qaadan Karo Isniin 21 Bisha Lixaad
CATINO Qolka Musqusha Axad 20 Bisha Lixaad
Websaydh Codsiga Websaydhku Miisaska Miiska Soo-Bandhigidda Abaalmarintu Dhalada Diiwaanka Vinyl